Ny sekoly ny ankehitriny indray dia tamin'ny taona 1993.
1 Amin'ny ankapobeny
2.1 Ny sekoly ny Weimar (1919-p. 1925)
2.2 Ny sekoly ny Ντεσάου (1925–p. 1932)
2.3 Vanim-potoana farany
3 Ireo fitsipika fototra sy ny fiantraikany
4 Trano famokarana
5 Manan-danja ny solontenan'ny
5.1 Orinasa mpamorona sy ny mpanao mari-trano
5.2 Mpanao hoso-doko sy ny mpanao
8 Jereo koa ny
Amin'ny ankapobeny[hanova | hanova ny fango]
Ny fomba ny sekoly ny ankehitriny indray dia niasa ho toy ny fitaovana hitondra fiovana goavana eo amin'ny fampandrosoana ny zavakanto ankehitriny, indrindra eo amin'ny sehatry ny maritrano sy ny indostria famolavolana, raha ny asa vokarina ao amin'ny atrikasa ny sampam-pianarana lasa zavatra be dia be ny fiompiana.
Niara-niasa tamin'ny telo samy hafa tanàna ao Alemaina, any Weimar (1919-25), ao Ντεσάου (1925-32) sy Berlin (1932-33), eo ambany fitarihan' Walter Gropius (1919-28), Hannes Meyer (1928-30) sy ny Malahelo van der Gazela (1930-33), tsirairay avy. Ny fanovana ny foiben-toerany sy ny mpitarika dia mifandray amin'ny fiovana mifanaraka amin'ny politika sy ny manokana ny toetra mampiavaka ny ny fomba. Eo afovoany hevitra nasandratry ny sampam-pianarana, dia ny fampiasana ny teknolojia ho an'ny kanto tanjona, ny tsy fisian'ny fahasamihafana eo amin'ny tsara sy ampiharina ny kanto, toy izany koa ny ilana ny iray feno fampianarana ny rehetra ny zava-kanto teny. aza mba nampidirina ny fampianarana ao amin'ny laboratoara, mifanohitra amin'ny fomba fiasan'ny ny akademia, ary, nandritry ny fotoana fohy izany niara-niasa, dia nampianatra amin'ireo mpanakanto malaza ny taonjato faha-20, toy ny Volan-Kandinsky, Johannes Ίτεν, Marcel Μπρόιερ sy Paoly Klee.
Ny sekoly ny Weimar (1919-p. 1925)[hanova | hanova ny fango]
Ny manan-tantara fototry ny ankehitriny indray dia matetika apetraka ao amin'ny tapaky ny taonjato faha-19 sy ny Britanika hetsika zava-Kanto sy ny asa-tanana ny William Morris, mifandray amin'ny midadasika kokoa ny ezaka mba hahazoana ny fampidirana ara-javakanto tamin'ny fahariana azo ampiharina amin'ny rafitra, izay nitranga taorian'ny revolisiona indostria. Ny sekoly ny ankehitriny indray dia naorina tamin'ny 1919 nataon'i Walter Gropius ao amin'ny mpandala ny nentin-drazana ny tanàna ny Weimar , ary ny tany am-boalohany dia karazana natambatra ny Akademia ny Tsara Arts ao Weimar (alemà. Grossherzogliche Sächsische Hochschule für Bildende Kunst) amin'ny Sekoly Mampihatra ny zava-Kanto ao Weimar (alemà. Kunstgewerbeschule). Ny anarany dia tonga avy ny hiverenana amin ' ilay alemana teny Hausbau ("trano"). Ny tanjona farany ny ankehitriny indray dia ny ho tokan-tena an-tsekoly, na amin'ny maritrano sy tsara zava-kanto. Ny fitsipika fototry ny sekoly teo an-kalamanjana fanahy hiatrika ny zava-tsarotra vaovao-ny vanim-potoana, ary indrindra indrindra, ny fomba fiasa, bebe kokoa avy amin'ny azo ampiharina ny fomba fijery, ary tsy amin'ny foto-pisainana. Ao amin'ny fanambarana ny ankehitriny indray, nivoaka tamin'ny 1919, Gropius nanadihady ny fandaharam-pampianarana sekoly ary nanantitrantitra ny ilana ny abolishing ny fanavahana ny mpianatra amin'ny zava-kanto sy ny fiofanana ara-teknika, amin'ny fahitana ny famoronana vaovao karazana-trano noho ny ho avy, izay mety mitambatra amin'ny maritrano, ny sary sokitra sy sary hoso-doko ho iray endrika.
Ny Gropius naniry ny hitondra ny andraikitry ny mpampianatra dia ny manan-kaja sy ny mpanakanto malaza, na dia ny asa dia tsy afaka nidirana. Eo anivon ' ny voalohany izay nampianatra tao amin'ny sekoly ireo mpanao hoso-doko Johannes Ίτεν, Lionel Φάινινγκερ, Paoly Klee sy Vasily Kandinsky, ary koa ny mpanao Gerhard Manamarika , ary Oscar Schlemmer. Ny Ίτεν no iray amin'ireo tena επιδραστικές lazan ' ny sampam-pianarana, ary izay niforona ny taona voalohany ny fianarany tao amin'ny sekoly. Ny fandaharam-pianarana tafiditra voalohany fanomanana ny dingana (Vorlehre) nandritra ny faharetan ' ny enim-bolana, ary avy eo dia nanaraka ny telo-taona ny fandinihana ny vanim-potoana, nandritra izay ny mpianatra no voaofana saika ao amin'ny laboratoara (Werklehre), raha maka teorika taranja (Formlehre). Isaky ny atrikasa maintsy, ho toy ny loha roa ny mpampianatra, ny artista (Master der Endrika), ary ny iray teknisianina na ny teknisianina (Master ny Handwerks), izay manokana ao amin'ny iray na maromaro endrika zava-kanto. Ny fiofanana natao teo amin'ny fahazoana ny roa azo ampiharina ny fahalalana ara-teknika sy ara-javakanto fahaiza-manao, ny lehibe filozofia ny fianarana amin'ny alalan'ny fampiharana. Ao amin'ny atrikasa, ireo mpianatra dia nampianatra freehand sary, metalwork, lamba, hazo kanto, ny tanimanga, ny typography, famonosam-boky ary, amin'ny ankapobeny, ny fampiasana ny fitaovana isan-karazany, toy ny fitaratra, hazo, vy , andriamatoasns. Malaza ankapobeny ny fampianarana dia ireo Klee, amin'ny olana fototra ny endrika, ary koa ny seminera ny Kandinsky.
Na dia eo aza ny hetaheta ny sekoly, ao amin'ny dingana voalohany ny fandidiana dia tsy ho tanteraka ny fampiharana ny fandaharana. Ny fiaraha-miasa isan-karazany eo amin'ny laboratoara dia matetika voafetra, raha mbola tsy nisy hatrany am-piandohana, ny sampan-draharahan'ny ny trano. Ny taona voalohany ny ankehitriny indray dia nanamarika ihany koa ny ady teo Gropius sy Ίτεν, na eo anivon'ny manokana ny fahasamihafana sy eo anivon'ny fitsipika. Ny Ίτεν omeo lanjany manokana ny mizaka tena kanto fahariana, izay mety ho tsy mifanaraka amin'ny ara-tsosialy ilainy, na izany aza, Gropius liana voalohany indrindra ho an'ny ny fampidirana ny artista ara-tsosialy vatana, manohana ny miovaova ny sekoly ny indostria endrika, araka ny fotopampianaran ' "ny Haikanto sy ny teknolojia vaovao, ny firaisan-kina". Ny toerana Gropius, dia izay ny vaovao ara-tantara fe-potoana nanomboka tamin'ny faran'ny ady sy ny vaovao architectural fomba tokony ho hita taratra sy tandindon'ny vanim-potoana vaovao io, izay azo ampiasaina, mora nefa miaraka amin'izay koa amin'ny kanto ny filazana. Ny toerana misy ny Ίτεν nandray ny amin'ny 1923 voaroaka ilay Μόχοϊ-Νάγκυ, izay nampianatra ny fanomanana ny mpianatra ny sekoly mandra-1928, raha ny fitanana ny sasany amin'ireo fitsipika fototra nandova avy amin'ny Ίτεν. Ny fironana vaovao nanaraka ny sekoly nandritra ny vanim-potoana manaraka natolotra tao amin'ny fampirantiana ankehitriny indray dia tamin'ny 1923, izay tafiditra architectural sary ny J. J. P. Oud, Le Corbusier, Gropius sy Georg Muche, ary koa ny sary hoso-doko ny Joost Schmidt, Herbert Bayer, ary Oscar Schlemmer.
Ny sekoly ny Weimar dia ny Weimar Repoblika sy ny maha-fanjakana ny sekoly dia amin'ny lehibe fiankinan-doha amin'ny governemanta. Avy ny taona voalohany miasa, dia nampanekena ho mafy ny fanakianana, izay ny ankamaroany dia avy amin'ny mpifikitra amin'ny nentin-drazana ara-politika ny tafika, na dia eo aza ny faniriana ny Gropius ny mamolavola ny politika am-pianarana. Ny fijoroan'ny antoko mpandala ny nentin-drazana ny zo – maniry amin'ny tany am-boalohany fanakatonana ny sekoly – ao ny fifidianana ny 1924, nanamarika ny fampitsaharana ny fiasan'ny ny sekoly Weimar.
Ny sekoly ny Ντεσάου (1925–p. 1932)[hanova | hanova ny fango]
Ny sekoly ny ankehitriny indray dia ao ny Ντεσάου.
Taorian'ny fanapaha-kevitra politika ho fampitsaharana ny fiasan'ny ny sekoly Weimar, maro ny zavatra tanàna naneho fahalianana hampiantrano ny sekoly ankehitriny indray, anisan'izany ny Munich, any Hamburg, Darmstadt sy Frankfurt / lehibe indrindra, mba hanohy ny asany. Farany, ny sekoly dia nafindra tany amin'ny Ντεσάου, tanàna mivoatra kokoa sy ny indostria. Ny fanorenana ny sekoly amin'ny Ντεσάου, ary koa ny trano fonenana ny mpampianatra, natao ny Gropius, dia ny famintinana ny maritrano maoderina any Alemàna sy laharana an-trano manan-danja indrindra tamin'ny taonjato faha-20.
Ny fanovàna ny toerana misy ny sekoly dia efa miaraka amin'ny lalina ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fiasan'ny. Ny faharetan ' ny fanomanana avo roa heny, raha ny isan'ny laboratories nihena ny fanesorana ny laboratoara ny vitsy. Ny sekoly ihany koa ny nahazo ny anaram-boninahitra ny momba ny Famolavolana (Hochschul für Gestaltung) ary dia nanavao ny mitovy lenta amin'ny hafa ny akademia ny tsara zava-kanto. Tamin'ny novambra 1925, Gropius nanorina ny ankehitriny indray (ankehitriny indray GmbH), izay namela ny fanararaotana ara-barotra ny vokatra ankehitriny indray, raha avy aprily 1927 niasa tao amin'ny sampan-draharaha momba ny maritrano, eo ambany fanaraha-mason'ny Hannes Meyer. Ny fomba ny ankehitriny indray ary ny mpanao mari-trano izay nampianatra, nisy fiantraikany be ny fampirantiana ho Faty Wohnung (Ny toeram-ponenana hita maso) nokarakarain'ny Deutscher fikambanana alemana tao Stuttgart. Singa manan-danja momba ny tatitra dia ny fandaharana Weissenhof Siedlung, ny tetikasa fananganana fanorenana lehibe. Tany am-piandohana 1928 ny Gropius nanaiky ny fialany amin'ny maha-talen'ny sekoly, ny fisafidianana ny asa amin'ny maha-tsy miankina ny mpanao mari-trano. Manodidina io fotoana io ihany niala tao ihany koa ny Μοχόλι-Νάγκυ, Bayer ary Μπρόιερ, raha ny adiresy ny sekoly nomen ' ny mpanao mari-trano Hannes Meyer, mandra-aogositra 1930.
Vanim-potoana farany[hanova | hanova ny fango]
Eo ambany fitarihan ' Meyer, nampirisika fiovana lehibe, na ny fiasan'ny ny sekoly sy ny fitsipika fototra izay izany dia mifototra. Ny Meyer ihany koa ny mpanohana ny marksista foto-kevitra , ary nahita sekoly bebe kokoa ho toy ny tranga ara-tsosialy. Ny fandaharam-pianarana ny nitodika tany amin'ny fanitarana ny famokarana faobe, miaraka amin'ny tanjona ny fahafaham-po ara-tsosialy ilainy, nandao ny tany am-boalohany fanambarana ho an'ny holistic fitsaboana ny endrika zava-kanto. Ny sampan-draharaha momba ny maritrano dia lasa ho iray ny tena faritra ny sekoly, fa tsy araka ny fitsipika voalaza ao amin'ny fanambarana ny Gropius, fa bebe kokoa ho toy ny mijoro irery departemantan'ny sekoly ny ankehitriny indray. Ny Meyer koa nampiely ny teny ny mpianatra, izay tsy voatery ilaina ny fironana ho amin'ny zava-kanto, raha jerena ny fomba ny andraikitry ny sekoly dia nahasarika ny olona maro sy ny fampidirana ao amin'ny fiaraha-monina. Ny fanoloran-tena ny Meyer momba ny marksista hevitra sy ny matanjaka ara-politika ny natiora, izay nisy ny sekoly, nandray anjara tamin'ny lasa ny tale, ao ny taona 1930, ary nosoloina Malahelo van der Gazela, izay hajaina mpikambana ao amin'ny teny mialoha-garde trano. Ny van der Gazela nanandrana ny hanambatra ny ara-tsosialy ny toetra amam-panahy ao an-tsekoly, izay voafetra ihany koa, amin'ny avo hatsarana fepetra. Eo ambanin 'ny lalana, dia voarara misy karazana hetsika politika ny ampahany mpianatra, mametra ny tanjon' ny fianarana fandaharana ao handicraft sy kanto ny fampianarana ny mpianatra. Amin'ny ankapobeny, ny sekoly no tena mifantoka amin'ny maritrano, raha ny laboratoara dia nitsahatra mamokatra ara-toekarena exploitable vokatra, izay nahatonga ny fihetsiky ny mpianatra. Ny fanapahan-kevitra sy ny toro-lalana ny van der Gazela efa lasa ny zavatra ανάμικτης tsikera avy amin'ny mpahay tantara, toy izany koa ny fiheverana momba ny mazava ho azy fa tsy maintsy manaraka ny sekoly ankehitriny indray.
Fomba ny trano ny mpampianatra amin ' ny sekoly ny Ντεσάου.
Eo ambany henjana ny fanerena ara-politika, ny sekoly ny Ντεσάου nitsahatra ny miasa tamin'ny 1932. Fa niasa indray ao Berlin, eo ny fandraisana van der Gazela, mandra-ny vanin-taona mafana ny 1933, fotoana izao ho toy ny tsy miankina "tsy Miankina ny Fampianarana sy ny Fikarohana ivon-toerana". Ny sekoly ny Berlin nanana ny fandaharana isan-karazany ny fianarana, miaraka amin'ny faharetan'ny fito semesters ary dia mikendry ny fanofanana ny mpianatra ao an-tsaha isan-rafi-trano. Araka ny fiheverana ny hery Adolf Hitler tamin'ny 1933, dia misy ny maharitra fanakatonana ny sekoly ankehitriny indray. Ny Nazi antoko efa nanohitra ny ankehitriny indray dia mandritra ny folo taona ny '20 taona mahery kely, ary koa ny handray azy io ho toy ny anoloan'ny ny kôminista, indrindra fa satria maro ny rosiana mpanakanto nandray anjara izany. Ny Minisitry ny Atitany sy ny Fanabeazana, Wilhelm Frick, no voalohany natao manohitra ny renirano ny zavakanto ankehitriny, izay avy 1934 no mampiavaka ny fanjakana nazi ho toy ny "tsy-alemana".
Ireo fitsipika fototra sy ny fiantraikany[hanova | hanova ny fango]
Ny seza Wassily, iray amin'ireo malaza indrindra zavatra natao Marcel Μπρόιερ.
Ny lafiny manan-danja ny ankehitriny indray dia tsotra, ny fomba fiasany sy ny fiasa izany, ary manasongadina manokana voafaritra amin'ny endrika sy ny loko. Ny sekoly ny ankehitriny indray dia nandà tsy ilaina ny haingon-trano singa, mihevitra ho manana ny mitovy akora ahitana ny karazana voajanahary ary raiki-tampisaka haingon-trano fahaiza-manao. Ny tanjon'ny sekoly dia ny ankehitriny indray dia ny piharian-ny faobe famokarana vokatra, toy ny fanaka, fa ny foto-kevitra rehetra ny amin'ny tokantrano iray, na dia niresaka mifanohitra amin'ny fironana feno varotra, ny fitandremana ny mpampianatra izay nampianatra avy tao an-tery sehatry ny famokarana, nitarika azy mba handinika ny asa fanehoana ny famoronana sy ny kanto. Ny tena tsangan-kevitra izay izany dia mifototra sy ny fanabeazana firafitry ny sekoly ny ankehitriny indray dia fa ny tanjona farany dia ny fampidirana sy miray rafitra. Amin ' izany fomba izany, ny hetsika ny ankehitriny indray dia niezaka mba hampiraisana ny foto-kevitra momba ny zava-kanto amin'ny dingana famokarana, fa nametraka ny fitaovana mekanika ara-teknika noho ny fahaiza-mamorona. Ny sekoly dia nampiasa ny olombelona tsirairay dia ezaka eo amin'ny sehatry ny orinasa famokarana, izay tany aloha dia tanteraka ny fitsipika.
Ny ankehitriny indray dia efa misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fironana ny zava-kanto sy ny maritrano ao amin'ny faritra andrefan'i Eoropa ary ao amin'ny United States , rehefa maro ny artista tafiditra ao amin'izany ireo sesitany noho ny fanjakana nazi ary nikatsaka ny harena misy. Ny fomba fampianarana sy ny hevitra nataony hatrany ny sekoly, amin'ny alalan'ny fampitana ny mpianatra sy ireo hafa mpandray anjara. Ny Walter Gropius, Marcel Μπρόιερ sy Μόχοϊ-Νάγκυ efa niara-niasa tamin'ny tapaky 'ny faha-30 taonany any Angletera, fa ny orinasa Isokon hatramin'ny nipoahan'ny ady. Amin'ny faran'ny ny folo taona 30, ny van der Gazela nanorim-ponenana tao Chicago, izay mbola nanohy soa aman-tsara ny seho-miasa, rehefa maka ny adiresin'ny ny sampan-draharaha momba ny maritrano ny momba ny Teknolojia Illinois (ivon-toerana Fiarovana). Ny Μόχοϊ-Νάγκυ naorina tamin'ny 1937, tao Chicago, ny "Vaovao ankehitriny indray" (Vaovao ankehitriny indray, taty aoriana ny Institute of Design), noho ny fiahiana ny industrialist Walter Paepcke. Ny Herbert Bayer, miaraka amin'ny fanohanan'ny Paepcke nandray anjara tamin'ny fandaharana maro ny Aspen ny etazonia, nandray anjara tamin'ny fananganana ny Institute of Aspen. Samy Gropius sy ny Μπρόιερ nampianatra tao amin'ny sekoly momba ny famolavolana ny Harvard (Harvard Graduate School of Design), ary niara-niasa teo amin'ny sehatry ny asa mandra - 1941. Ny fizarana ny Harvard, nisy fiantraikany lehibe tamin'ny faramparan'ny faha-40 taonany sy ny tany am-boalohany 50s, nahazo diplaoma, toy ny Filipo Johnson, I.M. Pei, Lawrence Halprin sy Paoly Rudolph.
Fahitana ny fananganana ilay Rakitra ankehitriny indray dia tao Berlin.
Ny fe-potoana 1953-68, niasa tany Alemaina Andrefana ny Hochschule für Gestaltung, fantatra amin'ny anarana hoe ny Sekoly Ulm, mitsangan ny sasany hatraiza ny mpandimby ny ankehitriny indray. Tamin'ny taona 1960, dia nanorina ny Rakitra ankehitriny indray (Bauhausarchiv) ao Darmstadt, amin'ny alalan'ny Hans Maria Wingler, noho ny antony fikarohana sy ny fanandratana ny tantara sy ny fiantraikan'ny ny sekoly. Tamin'ny 1971 dia nafindra tany andrefana Berlin ary dia mitoetra ao amin'ny trano natao ny Walter Gropius, raha nivoatra amin'ny mirazotra ao amin'ny tranom-bakoka ho an'ny indostria famolavolana. Ny taona 1994 niorina ny vahoaka ny Fondation ankehitriny indray-Dessau, noho izay ny oniversite ankehitriny indray-Dessau nanomboka tamin'ny 1999 ny hanome nahazo diplaoma teny fandaharana amin'ny mpandray anjara manerana izao tontolo izao.
Amin'izao fotoana izao ny sekoly ny ankehitriny indray dia mariky ny modernism, miaraka amin'ny fiantraikany lehibe eo amin'ny fivoaran'ny functionalism (φονξιοναλισμός). Ny tena zava-dehibe ny fandraisana anjara eo amin'ny sehatry ny famolavolana ny orinasa ny vokatra ary indrindra fa ny famolavolana ny ny fanaka. Be dia be ny endri-javatra vokatra ankehitriny indray dia mivezivezy lazaina ho toy ny amin'izao fotoana izao, toy ny wallpapers, ny lamba, ny e, ary ny malaza ny vy seza.
Trano famokarana[hanova | hanova ny fango]
Ny zavatra lay amin'ny izao tontolo izao ny fampirantiana 1929 tao Barcelona, Malahelo van der Gazela.
Ao anatin'ny sekoly, nampianarina ny zavatra tsy maintsy atao amin'ny maritrano, ny famolavolana sy ny farany fanorenana. Ny fifanoheran-kevitra ao amin'ny taona voalohany eo ny fandidiana dia ny hoe, na dia nilaza aza izy fa ny tanjona farany ny rehetra famoronana asa dia trano, sy ny tetikasa fanorenana, ny sekoly dia tsy nanolotra ny maritrano taranja ihany rehefa 1927. Nandritra ny vanim-potoana ny fitantanana ny sekoly, amin'ny alalan'ny Walter Gropius sy Meyer, ny architectural famokarana ny ankehitriny indray dia tao amin'ny ankapobeny ihany, malaza amin'ny asan 'ny toeram-ponenana ny Adolf Ζόμερφελντ sy ny mpianakavin' Otte ao Berlin, ary koa ny drafitra ho an'ny tilikambo Tribune Tilikambo tao Chicago, natolotry ny biraon'ny Gropius ' fanasana-malefaka. Ny fanorenana ny sekoly ny ankehitriny indray dia ao ny Ντεσάου ihany koa ny heverina ho tena zava-dehibe. Mpianatra ao amin'ny sekoly nandray anjara indrindra ny madinika isan-karazany ny asa ao anatiny (famolavolana birao, ny tanimanga, ny atitany ravaka, andriamatoat.l). Ao ny roa taona ny adiresy Meyer, ny filozofia ny sekoly no nifindra avy amin'ny hatsarana fahamarinan-toetra ny fahafaha-miasa sy ny fahafaham-po ny fepetra ny ny mpampiasa. Ao amin'ny vanim-potoana io no nahazo ny loka tao amin'ny sekoly lehibe ny tetikasa, anisan'izany ny iray ho an'ny tanànan'i Ντεσάου, izay mandray anjara amin'ny fanorenana ireo tranobe dimy izay foana ny daty, ary ny iray ho an'ny tanàna Bernau, sy ny fananganana ny birao Federaly an-Tsekoly ny teny Sendika (ADGB).
Rehefa nandray ny fitantanana ny sekoly ny Malahelo van der Gazela, nolavin'ny ny teo aloha politika Gropius sy Meyer, toy izany koa ireo mpanohana azy rehetra, na izany aza ao amin'ny vanim-potoana io dia tsy misy naorina-ao amin'ny fandaharan'asa na tetikasa avy amin'ny sekoly. Eo amin'ny lafiny architectural famokarana, ny fijery fa ny ankehitriny indray dia tompon'andraikitra be dia be ny tetikasa ny fananganana maro ny tokantrano no tsy marina. Afa-tsy, izany dia tsy ny laharam-pahamehana voalohany ny Gropius ary van der Gazela.
Ny ankehitriny indray dia tsy ny hany avant-garde nandritra ny Functionalism, Tany Francfort, allemagne, ny Ernst Μάυ efa nanomboka tetikasa Vaovao Frankfurt (Neues Frankfurt) dia tompon'andraikitra maro ny zava-baovao ireo trano miorina eo amin'io vanim-potoana in Frankfurt.
Manan-danja ny solontenan'ny[hanova | hanova ny fango]
Fidirana ny trano ao amin'ny Ντεσάου.
Ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra ny mpanakanto sy ny mpanao mari-trano izay nampianatra tao amin'ny sekoly ny ankehitriny indray dia:
Orinasa mpamorona sy ny mpanao mari-trano[hanova | hanova ny fango]
Malahelo van der Gazela (Mies van der Rohe)
Walter Gropius (Walter Gropius)
Marianne Matin'ny (Marianne Matin'ny)
Marcel Μπρόιερ (Marcel Breuer)
Kristianina Dell (Kristianina Dell)
Jaona Δεσποτόπουλος (Jan Despo)
Mpanao hoso-doko sy ny mpanao[hanova | hanova ny fango]
Vasily Kandinsky (Wassily Kandinsky)
Paoly Klee (Paoly Klee)
Voaroaka Ilay Μόχολι-Large
↑ 1,0 et 1,1 "Bauhaus" (2005).
↑ 4,0 4,1 4,2 et 4,3 Rainer K. Wick:'Bauhaus', The Grove Art Online, Oxford University Press
Lambraki-Plaka, Marina, ankehitriny indray: Avy idealism ny φονκσιοναλισμό, talohan'izay. Rahona 1986
Droste Magdalena, Ankehitriny Indray 1919-1933, Taschen/Fahalalana 2006
Franciscono, M., Walter Gropius sy ny Fananganana ny ankehitriny indray, Oniversiten'i Illinois asa fanaovan-Gazety, taona 1971
Girard Xavier, ankehitriny indray, Agra-boky, tamin'ny taona 2005
Gropius W., Ny Vaovao, ny Maritrano sy ny ankehitriny indray, MIT ny asa fanaovan-Gazety, taona 1965
Hochman E. S., ankehitriny indray: Ambohipihaonan'ny ny Modernism, Fromm Iraisam-pirenena, tamin'ny taona 1999.
Wingler H. M., Ny ankehitriny indray, MIT ny asa fanaovan-Gazety, taona 1983
Wingler, Hans, ny ankehitriny indray: Weimar, Dessau, Berlin, Chicago, MIT ny asa fanaovan-Gazety, 1978
Rakitra Ankehitriny Indray (Berlin)
Fototra Ankehitriny Indray-Dessau
Busch-Reisinger Museum - Harvard University Tranom-Bakoka Zavakanto
UNESCO - Trano ny sekoly ny Weimar sy ny Ντεσάου, toy ny Tsangambato ' izao Tontolo izao ny Lova ny UNESCO
Ankehitriny Indray, Ellie Economides
Lahatsoratra avy lilo & stitch nilalao onja.gr (Vavahadin-tserasera myAegean)
(Lahatsoratra ho an'ny ankehitriny indray) Archived Febroary 7, 2012 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bauhaus&oldid=1016291"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 16:18 ity pejy ity.